नेपालमा तन्त्रपरम्परा - RatoKalam.com is No one news portal.
भगवान् शिवजीद्वारा निःसृत भएको मानिने तन्त्रशास्त्र नेपालमा पौराणिककालदेखि नै प्रचलनमा आएको मानिन्छ । सरल भाषामा व्याख्या गर्नुपर्दा ज्ञानको विस्तारका रूपमा बुझ्न सकिने तन्त्र विद्याको प्रयोग हिन्दु धर्मका साथै बौद्ध, जैन, शिख, बोन, दाओ, सिन्तो आदि धर्ममा समेत प्रशस्तै हुने गरेका पाइन्छन् । तन्त्र विद्याका केही पौराणिक उदाहरणसहित तन्त्रसम्बन्धमा विविध विषय समेटिएको सन्दीप सापकोटाको प्रस्तुति
 तन्त्र भनेको के हो ?
देवीदेवताको विग्रह मन्त्रका रूपमा रहेको हुन्छ । देवताहरू तीन रूपमा रहेका हुन्छन्– १. परा २. सूक्ष्म ३. स्थूल । सामान्यतः मान्छेले देवीदेवताको स्थूल रूपको उपासना गर्ने गरेको हुन्छ तथा त्यसकै सहाराले मानव देवीदेवताको सूक्ष्म रूपसम्म पुग्न सक्तछन् । तन्त्रशास्त्रमा अधिकतर कार्य मन्त्रद्वारा नै गर्ने गरिन्छ । थोरै उच्चारण गरेर धेरै जान्नु तन्त्र हो । असङ्ख्य अर्थहरूलाई व्यक्त गर्न सक्ने विचार, भाव वा तŒव तन्त्र हो । मानव शरीर तन्त्र, मन्त्र र यन्त्रले चल्छ । हाम्रो शरीरको व्यवहार तन्त्र हो भने शरीरमा बसेर जो विचार पलाउँछ त्यो मन्त्र हो । यस अर्थमा मानव शरीर स्वयं यन्त्र हो । तन्त्र सिद्ध भयो भने अष्टसिद्धि प्राप्त हुन्छ ।
तन्त्रको एक विशिष्ट उदाहरणका रूपमा पाटनमा अवस्थित कान देवताको प्रसङ्गलाई लिन सक्छौँ । मल्लकालीन समयमा तत्कालीन कान्तिपुर र पाटन राज्यका राजाबीच गहिरो वैमनस्यता थियो । यसैक्रममा पाटनका राजाले तन्त्रको प्रयोगमार्फत षड्यन्त्र रचे । तान्त्रिक गुरुपुरोहितको मद्दतबाट पाटनका राजाले काठमाडौँका राजाको कमजोरी थाङ्का (पौवा) चित्र हो भन्ने थाहा पाई तीन यन्त्रको सिर्जना गरे र अत्यन्त कलात्मक स्वर्ण लिखित पौवाचित्रमा यन्त्रलाई गुप्त रूपमा राखी कान्तिपुरका राजालाई भेट गरे ।
कान्तिपुरका राजाले विशिष्ट व्यक्तित्वबाट प्राप्त उपहार आफ्नो अन्तःपुरमा झुन्ड्याइराखे । अर्को यन्त्र बागमतीकिनारमा एउटा ठूलो खम्बा बनाई कानको आकृति रूपको यन्त्र र अर्को यन्त्र पाटनकै राजाको दरबारमा राखे । त्यो तीन यन्त्र आपसमा अन्तर्सम्बन्धित थियो । कान्तिपुरको गतिविधि र गोप्य संवादलाई पौवा यन्त्रले कानदेवतामा पठाउँथ्यो र कान देवताले पाटन दरबारमा फ्याँक्थ्यो । यसरी कान्तिपुरको गोप्यता पाटनका राजाले थाहा पाउँथे । पछि गएर कान्तिपुरका राजा र रानीको राज्यको विषयका गोप्य संवाद पाटनमा यत्रतत्र सर्वत्र फैलियो । कान्तिपुरका राजाले यो के भयो भनी गुरुपुरोहितको सहायताबाट विचार गर्दा पाटनका राजाको सबै कर्तुत थाहा पाएर कान्तिपुरका राजाले पनि यन्त्रलाई नै ठीकविपरीत गरेका थिए र यो क्रिया पनि पाटनमा ज्ञात भएपछि पाटनका राजाले यन्त्र निष्क्रिय गराउन लगाएका थिए ।
नेपालमा बच्चा जन्मेदेखि मरेपछि पनि तन्त्र र मन्त्रको चौघेरामा उसको अस्तित्व र आत्मा घुमिरहेको हुन्छ । तोडल तन्त्र र सर्वोल्लास तन्त्रमा उल्लेख गरिएका ६४ तन्त्रको नाउँ चतुःशती र श्रीकण्ठीको तन्त्र सूचीसँग मेल खाँदैनन्, जसमा काली, मुण्डमाला, तारासहित कामाख्या तन्त्रमा उल्लेख भएको ६४ तन्त्रहरूको नाउँ पनि समावेश छ । यी तन्त्रहरू सन् १७५४ ई लिपिबद्ध गरिएको हस्तलिखित पुस्तक इन्डिया अफिस लाइब्रेरी लन्डनमा ब्रिटिस शासकहरूले पु¥याएका बताइन्छ । आठौँ शताब्दीभन्दा पहिलेको जयद्रथयामल तन्त्रको धेरै कुरा यही ग्रन्थले प्रस्ट पारेको छ । आठ किसिमको यामल तन्त्रको मूलग्रन्थ ब्रह्मयामल तन्त्रलाई मानिएको छ । यसका प्रमुख उपासक नेपालका तत्कालीन श्री ५ प्रतापसिंह शाह थिए । त्यो पुस्तक तत्कालीन नेपालको राजदरबारमा रहेको थियो भने ११७४ ईमा लेखिएको पिङ्गलातन्त्र नामक ग्रन्थ, जसलाई ब्रह्मयामल तन्त्रको परिशिष्ट भएको भन्ने गरिएको छ । त्यो पनि तत्कालीन नेपालको राजदरकारमा रहेको थियो । अहिले तन्त्रशास्त्रका ती दुर्लभ ग्रन्थहरू कहाँ पुु¥याइएको छ खोजीको विषय हो । यिनै तन्त्रशास्त्रहरूको साधकहरू तत्कालीन नेपालमा प्रशस्त भएका कारण तन्त्रशास्त्रअनुसार नेपालमा छाग (बोका), महिष
(राँगो), मेष (भेडा), कुखुरा र हाँस बलि दिने चलन बसेको हो । हाम्रो तन्त्र सभ्यताको महŒवपूर्ण सोच बलिप्रथा जीवनको पूर्ण परम मुक्तिसँग गाँसिएको मानिन पुगेको हो ।
दोलखा भीमसेनलाई पसिना आउँदा उपद्रो हुने विश्वास र क्षमापूजा, सर्वाध्या परमेश्वरी तुलजा भवानीले कुनै बेला राजासँग प्रत्यक्ष पासा खेलेको, पाटन राज्यमा एक बालिका र एक करिब ५९ वर्षकी हालसम्म रजस्वला नभएकी कुमारी आदि लगायतका प्रसङ्गले तन्त्रलाई अझ नेपाली सन्दर्भमा व्यापक बनाएको छ । राजा राम शाहले तन्त्रकै बलमा न्याय सम्पादनका उदाहरण बन्न सफल भए । प्रताप मल्ल, लक्ष्मीनरसिंह मल्लको युग तन्त्रमन्त्रले भरिपूर्ण थियो । राजा सिंहप्रताप शाहले काठमाडौँ श्मसान भूमिमा मृत महिलाको यौनाङ्गमा तन्त्र साधना गरेर सिद्धि प्राप्त गरेको आख्यान अहिले पनि सुनिन्छ । यस्तै, शिवपुरी बाबाको शक्ति पनि तन्त्रकै हो भने भारतमा पनि सिद्ध तान्त्रिकहरूको सङ्ख्या ठूलै छ ।
नेपालको तन्त्रमन्त्रको रहस्य पत्ता लगाउन विदेशी मुलुक कस्सिएका छन् । राजधानीको फोहोर सफा गर्ने नाममा, काठमाडौँ, भक्तपुर र पाटन ‘दरबार स्क्वायर’ सफा गर्ने, पुनःनिर्माण गर्ने नाममा तन्त्रमन्त्रको अनुसन्धानमा उनीहरू व्यस्त रहने गरेका भनाइ छ । विदेशीले पाटन दरबार स्क्वायरको पुनःनिर्माणमा सघाएर कृष्ण मन्दिर र आसपासका मन्दिर, गुठीमा व्यापक अनुसन्धान गरिरहेका फगत गफमात्रै होइनन् । आज पनि लामा, राई, तामाङ मन्त्र सिक्न र लामा तन्त्र शिक्षा आर्जनका लागि वर्षको दुई हजारभन्दा बढी विदेशीहरू नेपाल आउने गरेको बताइन्छ । हामी आधुनिकतालाई अँगालेर पुरातनलाई फ्याँक्दै र विसर्जन गर्दै गइरहेका छौँ, विदेशीहरू पुरातनभित्र के छ भनेर खोतल्दै र सङ्कलन गर्दै गइरहेका छन् । जर्मनी कानुनले धामीझाँक्री अध्ययनलाई मान्यता र महŒव नै दिएको छ । युरोपेलीहरू पूर्वीय दर्शनभित्र विचरण गर्न थालेका छन् भने हामी हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई अन्धपरम्पराका नाममा केवास्ता गर्दै छौँ ।
युरोपेली राष्ट्रका एक टोलीले नेपालमा कागपूजा, कुकुरपूजा, गाईपूजा, शालिग्रामपूजा र बोक्सीबारे अनुसन्धान गर्न थालेका केहीअघि थाहा लागेको थियो । उनीहरू हनुमानढोकामा नाइटो किन गाडिन्छ, किलागलमा किन पैसालाई किला ठोकिन्छ, मन्दिर र जात्रामा तन्त्रपूजा किन गरिन्छ भन्नेसम्मका विषयमा अध्ययन गरिरहेका छन् । हाम्रा समाजशास्त्री र सरकारलाई यसबारे अत्तोपत्तो छैन । यसतर्फ पनि ध्यान दिने कि ?
(लेखक, नेपाल सामुदायिक विकास पुस्तकालय अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।)